La casita del Pez in Miraflores de la sierra - I-Airbnb
La casita del Pez in Miraflores de la sierra
Miraflores de la Sierra, Comunidad de Madrid, i-Spain
Ngihlala endlini enhle kusukela ekupheleni kwekhulu le-19 eyazalelwa ebukhazikhazini be-Miraflores de la Sierra, ezungezwe imvelo echichimayo, imizila yezintaba emangalisayo, ukuhamba okumnandi kanye ne-gastronomy enhle. Ngisebenzisa iphansi eliphansi ngomnyango ohlukile lapho ungajabulela khona ingadi nechibi lentaba ehlobo ukuze ubalekele ukushisa, futhi ebusika uzothe emlilweni. Siyimizuzu emibili ukusuka esigcawini sedolobha kodwa kusukela emnyango wendlu ungaqala imizila eminingana.
Isitezi esiphansi sifana nefulethi elinamagumbi amabili okulala abanzi anokukhanya okuningi. Inamagumbi okugeza amabili agcwele kanye nekhishi elihlome ngokuphelele. Igumbi lokudlela line-salamander enhle kakhulu ebusika. Uzokwazi ukujabulela ingadi nawo wonke amakhona ayo futhi nakuba uzokwabelana nathi, sizokuhlonipha ubumfihlo bakho. I-solarium inokubukwa okuhle kweLa Najarra ukuze ukushona kwelanga kube okwakho wedwa.
Indlu isenkabeni yedolobha, imizuzu emibili (ngokwezwi nezwi) uhamba usuka esigcawini sedolobha, lapho uzothola khona izindawo zokudlela, amabha, isitolo esikhulu, i-tobacconist ... konke okudingayo ngaphandle kokuthi uphendukele emotweni. I-Miraflores iyidolobha elincane kodwa elinazo zonke izinkonzo. Ukuhamba emigwaqweni yakhona futhi ujabulele amasimu akhona kuwumsebenzi omnandi kakhulu. Ukusuka ekhaya ungaqala imizila eminingana ngezinyawo, njenge-Fuente del cura, i-Pico de la Pala, i-Pinar de Aguirre, ichibi... Ngaphezu kwalokho kukhona umqansa oya e-Puerto de la Morcuera noma e-Puerto de Canencia onamabhayisikili amangalisayo. imizila. Amadolobha azungezile afana neBustarviejo, iManzanares el Real noma iRascafría mahle.
Ngihlala esitezi esikhulu sendlu ngakho ngizokujabulela ukukusiza nganoma yini oyidingayo futhi ngincome imizila noma izindawo zokungcebeleka. Uma ngingatholakali uyohlala ekhona ongakusiza uma unezinkinga.
Hlola ezinye izinketho ezise- Miraflores de la Sierra namaphethelo